Vaovao - Momba ny gel UV Nail UV, miloko amin'ny fiainanao
Momba ny Nail UV gel poloney, miloko eo amin'ny fiainanao
Nail UV gel poloney
Ny lokon'ny gel miloko izao dia azo raisina ho toy ny fandidiana mahazatra amin'ny salon amin'ny fantsika. Tamin'ny voalohany dia nozaraina ho fantsika kristaly sy hoho phototherapy ny ankamaroan'ireo hoho, fa ankehitriny dia tsy fahita firy ireo fantsika kristaly. Ny hoho Phototherapy dia mila asiana hazavana ultraviolet aorian'ny fampiharana gel fototerôma. Taty aoriana, mba hanamorana ny fandidiana, ny lakaoly phototherapy dia namboarina mba ho mora apetraka toy ny poloney. Raha fintinina, ny mahasamihafa ny poleta amin'ny fantsika sy ny fantsika dia ny aorian'ny fampiharana ny poleta fantsika dia ilaina ny jiro.
Rehefa manamboatra poleta ianao dia mila manisy gel fototra ihany koa, toy ny tsiranoka mandanjalanja, lakaoly miasa, primer, tombo-kase sns.
Ny primer no hany fantsika amin'ireo gel ireo izay hifandray amin'ny fantsika. Izy io dia miankina amin'ny asidra malemy indrindra mba hametahana ny lakaoly lakaoly amin'ny hoho. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana tsiro asidra kely. Mba hamatorana azy ireo dia mila esorinao ny rano be loatra sy ny diloilo amin'ny hohonao amin'ny voalohany. Izany no mahatonga ny fivarotana fantsika maro handoko ny hohonao amin'ny fantsika alohan'ny manicure, tsy hanala rano sy diloilo fotsiny, fa koa handokoana ny hohonao. Ny haavon'ny convex sy convex, mba hahafahanao miantehitra amin'ny fitomboan'ny fikororohana mankany amin'ny fatorana tsara kokoa.
Ny mpanamboatra sasany dia hiantso ny ranon'ny fanadiovana tarehy hoho, ranon-javatra maina. Nolazaiko teo aloha fa tany am-piandohan'ny asa-nohomboana dia nohosorana matetika ny fantsika. Azonao atao ny mihevitra azy io ho fiankinan-doha amin'ny fomba ara-batana hiantohana ny fametahana, avy eo ny fomba simika dia mampifandanja ny tsiranoka. Mpanamboatra maro izao no milaza fa raha tsy misy poloney be loatra, dia afaka manisy ranon-javatra mandanjalanja mivantana amin'ny vatan'ny fantsika izy ireo, ary mampiasa ny fikajiany simika simika hanalana rano sy menaka hiantohana ny fametahana ny primer. Raha toa ianao ka olom-baovao na ireo izay tsy te-hamolaka ny fantsika loatra dia azonao atao ny mampiasa ranon-javatra mandanjalanja. Mazava ho azy, tsy mila manahy be loatra amin'ny fanimbana ny hoho ianao. Rehefa dinihina tokoa, ny tavanao dia azo asiana asidra salicylic.
Colour Uv gel poloney
Ny loko poloney dia ny mpiorina ao amin'ny gel, ary miankina aminy ny lokonao sy ny endrikao. Amin'izao fotoana izao, ankoatry ny loko iraisana, dia misy fomba isan-karazany misy glitter, maso saka, lanitra feno kintana, lakaoly jelly, lakaoly maloto, sns. Amin'ny ankapobeny dia tsy azonao an-tsaina izany, tsy misy zavatra tsy azonao vidina .
Poloney mandeha amin'ny laoniny
Araka ny fiasa ilainao dia azo zaraina amin'ny poleta misy fantsika izy io, ny famafazana gel, sns. Amin'ny ankapobeny, mba tsy hisy fiantraikany amin'ny endrika sy ny loko, lakaoly mangarahara no ampiasaina amin'ny ankapobeny. Raha mila mamelana ianao, dia mety mila lakaoly mangarahara miaraka amin'ny fivontosana tsara. Raha te-hanao firavaka na fanamafisana orina ianao dia mila lakaoly kely matanjaka kokoa. Raha ny marina, ny zava-dehibe indrindra dia ny mahita raha afaka manampy anao hahatratra ny zavatra ilainao ireo glue ireo. Ny tanjona tratra.
Ny olona sasany koa dia miantso azy io hoe poloney gel landy, poloney polon-kala uv (toa tsy mahazo aina), sns. Izy io dia karazana gel misy fantsika loko, saingy manana fikojakojana tena tsara ary afaka manoritra tsipika manify sy tsy tapaka. Izy io dia mety amin'ny sary tsipika, matetika amin'ny penina sary. Talohan'izay dia nisy horonantsary iray tao amin'ny Weibo izay notarihin'ny vehivavy manicure rosiana iray, izay tsy tsara tarehy.
Araka ny anarany, ny gel UV farany nampiasaina tamin'ny kanto. Ny sosona famehezana mahazatra, ny sosona famehezana mafy, ary ny sosona famehezana mangatsiaka dia mahazatra ankehitriny. Ny sosona famehezana mahazatra dia ny manazava sy miaro ny tampon'ny hoho fotsiny. Azonao atao ny mieritreritra ny sosona famehezana feno hatezerana ho toy ny sarimihetsika an-tariby voafitaka, fa hatanjaka kokoa izany. Ho fanampin'ny voalaza etsy ambony, ny sosona tombo-kase frosted dia hahatonga ny lokon'ny UV gel hamokatra vokany mangatsiaka amin'ny farany, izay tena mety amin'ny fomba ambany sasany